सत्ता परिवर्तन र स्वतन्त्रताले मात्र देश विकास हुँदैन | साहित्य संसार
पाठकले जे भने पनि मलाई स्वीकार्य छ - समाश्री	भेटवार्ता - भगवती बस्नेत	नोष्टाल्जिया एक मिठो प्रेम र अनुभूति हो - लारा [LARA]	दर्शन र चिन्तनको गोठालो हुनुपर्छ आजका पाठक - समदर्शी काँइलासँग कुराकानी	फेसबुकको हल्लाखल्ला भर्चुअल मात्र हो - केदार संकेतसंग कुराकानी	साहित्य संसार लेखक सूची: सत्ता परिवर्तन र स्वतन्त्रताले मात्र देश विकास हुँदैन ★ जयदेश श्रेष्ठ★ प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस १३, २०७३
लेखक : जयदेश श्रेष्ठ विधा/श्रेणी : लेख रचना संख्या : 17 प्रकाशन मिति : बुधबार, पुस १३, २०७३ जयदेश श्रेष्ठ समकालीन नेपाली साहित्यमा सक्रिय नाम हो । कथा, कविता, लेख निबन्ध लगायत नेपाली साहित्यका विविध विधाहरुमा कलम चलाउने जयदेश श्रेष्ठको इमेल - jaya_desh67@yahoo.com हो । जयदेश श्रेष्ठका अरु रचनाहरु आँखाले हेर,
सुनेको, लेखिएको सबै साँचो हुँदैन । नेताहरू सबै भ्रष्ट छैनन्, देश बनाउने भन्ने,ठुला नेताहरू सबै देशभक्त होइनन् । देशका जनताहरू लडाएर,सडक तताएर, भौतिक संम्पति जलाएर, बन्द हडताल घर्ना र बिरोध गरेर,सत्ताको खेलमा देश विकास हुँदैन । मान्छेको जीवन एक पटक आउन्छ । देश र जनताका पुस्ता सधैँ अन्धकार, गद्धारी नेताहरू बेलैमा चिनौँ, यो देश नेपाललाई बचाऔँ !
हिजो जनता अशिक्षित भएर ठुला ठालुले तलका मान्छेहरूलाई थिचो मिचो गर्दथे । गाउमा शोषक सामन्ती भन्दथे । देशमा १०४ वर्ष राणाहरूले शासन चलाए । २००७ सालमा कति शहिद भएर प्रजातन्त्र ल्याए । त्यही प्रजातन्त्रलाई पन्चायती निरन्कुस शासन भन्दै २०४६ सालमा जन आन्दोलनबाट प्रजातन्त्र आयो भनेर खुसी मनाउ गरे । आज लोकतन्त्र, जनतन्त्र भन्दै गणतन्त्रसम्म आई पुग्दा पनि जनताहरूले राहतको श्वास फेर्न पाएका छैनन् । जति सुकै जनता सजग र शिक्षित भए पनि राजनीतिक फोहरी खेलले देश अन्धकार र गरिबी तिर झन् झन् भासिँदै गएको छ । देश गम्भीर परिस्थितिमा गुज्रेको अवस्था भन्दै राजनीतिक स्वार्थमा नेताहरू आफ्नो अनुकूल राज्य व्यवस्था चलाउन मरिहत्य गर्ने राजनीतिक व्यक्तिहरूले भने देश डुबे पनि नेता र शासक वर्गहरूको भने दिन दुई गुना रात चौगुनाको व्यक्तिगत वृद्धि विकास गरेका छन् ।
पढेलेखेकाहरू बेरोजगार छन् । कामको खोजीमा अरब, मलेसिया अन्य विदेशी भूमि मजदुरी गरेर पठाएका रेमिटान्सले देश धानेको छ भनिए पनि बिदेशबाट फर्किए पछि घर व्यवहार भने व्यवस्थित रूपमा चल्न सकेका छैनन् आज पैसाको लागि विदेश जानेहरूको कतिको वैवाहिक र पारिवारिक अवस्था टुटेको भविष्य चकनाचुर भएका छन् । हामी जहाँ जन्मियौँ त्यो देशको माटो माया छ । स्वाभिमान, नैतिकता, इमान्दारीता राष्ट्रियता अनेकौ गुणवान नागरिक देशको लागि आफ्नो ज्यान हत्केलामा राखी देशको लागि मर्न र मार्न तयार हुनु पर्दछ । यस्तै नागरिकहरूबाट चुनिएको कर्मठ व्यक्ति जसले देशको शासन व्यवस्था चलाएको भए हामी नेपालीहरू सुन्दर देशको बैभवशाली राष्ट्रको नाममा सुचिक्रित हुने थियो हाम्रो देश नेपाल । आज किन विश्वका गरिब र राजनीतिक अस्थरिता भष्ट्राचार र असफल राष्ट्रतिर धकेलिदै छ ? हामी नेपालीहरूले नेता र पार्टीहरूलाई आवश्यकताभन्दा बढी विश्वास र भरोसा र्गयौ । नेता र पार्टीहरूको लगामको घोडा जस्तै भएर हरेक पार्टी र व्यक्तिको पछि लाग्यौ । नेताहरूको विश्वास र्गयौ । देश विकास र देश बदल्ने विश्वासमा अनेकौ आन्दोलन जन आन्दोलन जन युद्धलाई साथ दियौ । आज जनता र नेताहरूको दुरी आर्थिक समुन्नतीमा फरक भएका छन् । राष्ट्रिय सम्पतीमा नेताहरूको ब्रम्हलुट भएका छन् । नेताहरूको औषधी उपचार, देश विदेश भ्रमण खर्च तलब भत्ता सुविधाहरू भने कुनै विरोध अवरोध बिना संसदबाट पास हुने जनताको हितको नीति नियम संविधान भने थाती राखी महिनौँ संसद् अवरोध हुने यो कस्तो देश ?
जनताहरू भूकम्प, बाढी पहिरो, रोगब्याधी र आर्थिक कमजोरीबाट पिल्सिएका छन् । देशमा उद्योग धन्दा कलकारखाना बन्दले गर्दा काम गरी खाने वातावरण छैन । पढेलेखेकाहरू बेरोजगार छन् । कामको खोजीमा अरब, मलेसिया अन्य विदेशी भूमि मजदुरी गरेर पठाएका रेमिटान्सले देश धानेको छ भनिए पनि बिदेशबाट फर्किए पछि घर व्यवहार भने व्यवस्थित रूपमा चल्न सकेका छैनन् आज पैसाको लागि विदेश जानेहरूको कतिको वैवाहिक र पारिवारिक अवस्था टुटेको भविष्य चकनाचुर भएका छन् । विदेशी भूमिमा काम गरेर पाएको पैसाले जिन्दगीभर आफ्नो देशमा सुख भोगले बाँच्न सकिदैँन । चाहे जस्तो सुकै सानो काम किन नहोस आफ्नो भूमि आफ्नो ठाउँमा केही गरी आफू र अरूलाई फाइदा हुने काम गर्ने सके हामी र हाम्रो समाज अनि देश बन्ने थियो ।
जनताको इच्छा आकाक्षा र भरोसाको केन्द्र बिन्दु नेताहरूको नैतिक आचरण हो । देशमा व्यवस्था परिवर्तनसँगै मुख्य पार्टीका धेरै नेताहरूले देशमा शासन चलाउने अवसरहरू पाए तर पनि जुन गोरु आए पनि कानै चिरेको ! सबै नेताहरू दोष जति अरूमा थुपारेर आफू भने पानी माथिको ओभानोमा किन बस्न खोज्छन ? कमी र कमजोरी सबैमा हुन्छन् । जनताहरूको माझबाट चुनिएर आएका नेताहरू आफ्नो दायित्व, सिद्धान्त र हैसियत, बिर्सिएर पार्टी र व्यक्तिगत लाभमा किन लागि परेका छन् ? आज जनताहरू आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा र स्वार्थका लागि नेता र पार्टीको पछि लागेका छन भन्दा अन्यथा नहोला ! छिमेकी देश भारतले कालो धनलाई बैधानिकता नदिन आफ्नो देशको हजार र पाँच सयको नोट कारोवारमा बन्द गरेर धेरै पैसा हुनेहरूलाई करको दायरामा ल्याउने र सम्पति बिवरणलाई पारदर्शी बनाउन कठोर नीति अवलम्वन गरिरहदा हाम्रो देशका सर्वहारा वर्गका कमनिष्ट विलासी नेता बहालवाला प्रधानमन्त्रीको संम्पति बिवरण तीन तोला सून र एक कठ्ठा जमिन कति हाँस्यापद देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीकालमा एक दिनको खर्च पनि आफ्नो सम्पति नदेखाउने प्रधानमन्त्रीको विश्वसनियतामा जनताहरूले कसरी भरोसा गर्ने ? अगुवा नै बाटो हगुवा भए पछि सु–सासन, न्यायिक सु–व्यवस्था र सुन्दर स्वस्थ वातावरणको कल्पना कसरी गर्ने ?
देशको स्थायी सत्ता भने कै राष्ट्र र राष्ट्रियता हो । नेपाली जनताहरूमा देश प्रतिको आस्था भरोसा टुटनु हुदैन । देशको लागि आवश्यक परे मलाई बली चढाउनु भन्ने राष्ट्र भक्ति नागरिक र म मरे पनि मेरो देश बाँचिरहोस् भन्ने शासकको खाँचो महसुस भएको छ !
सम्बन्धित थप सामाग्रीहरु : कहाँ चुक्यो ? आज मेरो देश प्रतिभा परिचय – पूर्णा लिम्वू फरक मान्छे केयरगिभरको अन्तिम कथा र दीक्षितको सम्झना मैले सोचे जस्तो हुने भए महिला जनजागरण ज्योतिषी बा र मेरो प्रेम प्रतिष्ठानको पुरानो अनुहार मनकारी मन नेपाली साहित्यको सानो संसारसाहित्यिक अनलाइन पत्रिकाईमेल : info@sahityasansar.com